Ịgha mkpụrụ ma na-elekọta radish ojii n'ọhịa n'ọhịa: olee otú kwesịrị ekwesị na mgbe ị ga-arụ ọrụ ịgha mkpụrụ, n'oge a ka a na-akụ mkpụrụ ahụ, gịnịkwa mere ị ga-eji mee ka mmiri ghara ịkụzi ya? - Akwukwo nri - 2019
Atụmatụ nke kụrụ nwa radish n'ọhịa na griin haus
Black radish bụ ihe na-enweghị atụ na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ na-eguzogide ọgwụ ubi, dị maka na-eto eto na ọ bụla ókèala na isiokwu na nchekwa oge.
Na nlekọta kwesịrị ekwesị, osisi ahụ na-amịpụta mkpụrụ osisi buru ibu na uto dị mma, nke na-enye ohere iji mgbọrọgwụ na-esi nri maka nri nri nri, nakwa dịka ọgwụgwọ ọdịnala maka igbochi na ịgwọ ọtụtụ ọrịa.
Ọzọ n'isiokwu anyị ga-ekwu maka otu esi akụ ihe oriri a dị mma na ilekọta ya nke ọma, nakwa otu esi echebe gị ihe ọkụkụ site na pests.
Mmekọrịta na omenala ndị ọzọ
Ebee maka ole ka ị nwere ike ịzụta osisi?
Ebee ka ọ ka mma ịgha mkpụrụ na mbara ala na griin ha?
Otu esi akụ: nzọụkwụ site nzọụkwụ ntụziaka
Ịkwadebe ihe ndekọ na mkpụrụ osisi
Atụmatụ na nkà na ụzụ
Ihe ndị na-elekọta
Nsogbu na nsogbu siri ike
Ọ dị mkpa iburu n'uche oge okpomọkụ ahụ mgbe ịgha mkpụrụ. Oké okpomọkụ na-eme ka osisi daa.
Ghaa osisi ka o wee mezuo 100% germination. A ghaghi ichikota mkpuru osisi na ihe ngwọta nke potassium permanganate iji kpuchie ya.
E nwere ike ịgha mkpụrụ dịka otu mkpụrụ, na nests nke 3-5 iberibe.
Ọ dị mkpa ịgbaso iwu nke ntụgharị ihe ọkụkụ.
Mgbe akuku, na-ala ooh.
A na-ekpuchi ihe ndina nke abalị na ihe mkpuchi nchebe.
A na-atụ aro radish na-eto eto ka ọ kọchaa:
Ị nwere ike ghara ịkụ mkpụrụ na-acha uhie uhie mgbe ị na-egbusi mkpụrụ osisi, n'ihi na ha nwere ọtụtụ pests na ọrịa. Na-agha osisi red radish n'otu ebe n'ime afọ 3-4.
Ndị agbata obi a na-atụ aro ka a kụrụ maka nwa radish:
Mkpokọta aka na-eduga ná njedebe ọ bụla nke pests na slugs.
N'ihe banyere ntozuzu uzuzu, a na-ekewa ụdị oji redish na ụdị 4:
Mbụ obere-fruited, oge na-eto eto ruo 40-50 ụbọchị - "Ike". A na-agha ihe na March.
Ntozu ntozuOge ntoju ruo oge 50-60:
Na-akụ na mbubreyo April.
Oge etiti, na-eto ruo ụbọchị 75-80:
Na-agha ihe n'ime ufọt ufọt June ma ọ bụ mmalite July.
Ọgwụgwụ oge dị iche icheOge ogwu ruo ọnwa anọ:
A na-agha mkpụrụ n'ime ufọt July.
Mgbe ị na-ahọrọ ụdị dị iche iche iburu n'uche njirimara nke mpaghara ahụ. Na mpaghara na oyi na-atụ, a ghaghị ịhọrọ ụdị oge dị iche iche, nke ga-enwe oge iji bilie ma chaa chaa tupu mmalite nke ihu igwe oyi. N'etiti Russia na n'ókèala nke nwere ihu igwe na-ekpo ọkụ, a na-ahọrọ ụdị dị iche iche dabere na mgbe a na-ezube maka owuwe ihe ubi.
Na Moscow na St. Petersburg, ị nwere ike ịzụta mkpụrụ na akpa akwụkwọ 2 grams na ụlọ ahịa maka ndị na-eto eto. Ị nwekwara ike ịtụ ha n'usoro ntanetị. Ọnụ nke akpa dị iche iche site na 6 ruo 16 rubles na ụba 11 rubles na-ewepu nnyefe.
Na-akụ obere radish na ala na-emeghe, dịka ọmụmaatụ, na mba ahụ, ị ​​ga-ahọrọ oghere anyanwụ na-emeghe, dịka osisi dị ọkụ-achọrọ. A na-eji ehihie na-ekpuchi ya na ihe nchekwa iji chebe strelkovaniya. Mgbe ị na-akụ mkpụrụ osisi radish n'ọkụ, ị nwere ike ịhọrọ ebe ọ bụla griin ha, na enweghị ìhè site na iji oriọna fluorescent. A naghị achọ akwa ndị dị nso n'abalị.
Mgbe na otu esi akụ osisi radish na-adabere na okpomọkụ, nke a ga-edozi na ihe dị ka + 2-3 degrees.
A na-akụ mkpụrụ dị iche iche dị ntakịrị mkpụrụ n'ime etiti March.
Malite n'oge mbụ - na mbubreyo April ma ọ bụ mmalite May.
Oge etiti - na etiti June.
Ọgwụgwụ oge - na etiti July.
Ala ga-abụ ezigbo drained na kpụ ọkụ n'ọnụ.kpuchie ọtụtụ n'ime ụbọchị. A na-ekwe ka ala mmiri mmiri na aja aja dị, ka ha na-ejigide mmiri dị mkpa. Onye na-ajụ ya bụ acid acid na-adịghị ike, ma ọ bụ nke na-adịghị ike, ọ na-anọpụ iche. A ghaghị gbakọọ ihe na-edozi ọnụ na ọnụego 200 grams nke wayo maka 1 square mita.
Ha na-egwu ala, na-eme ka ịnweta nri dabere na potassium, superphosphate, urea. A na-etinye ala ala na humus, compost, ash. A naghị atụ aro nri maka black radish, n'ihi na nke a nwere ike imetụta uto mkpụrụ osisi ahụ.
Ihe ndị dị mkpa maka akuku osisi - a obere-rake, aka akuakuzinwo. E kwere ka ọdịda akwụkwọ na-enye ohere.
A na-edozi mkpụrụ osisi radish na-akụghị tupu ị kụrụ - wụsa nnu nnu nkedo na ọnụego 1 tablespoon kwa 200 ml mmiri.
A na-ewepụ mkpụrụ osisi ndị na-atụ n'elu mmiri.
Akpọrọgwụ mkpụrụ osisi ndị a kọnyere mkpọrọgwụ ma sieved site na sieve iji mee ka ha dịkwuo oke: mkpuru osisi ndị a na-adịghị ahụpụta site na sieve kwesịrị iwepụ.
Mgbe edozi, a na-etinye mkpụrụ osisi na gauze mmiri maka kachasị germination.
Otu ụbọchị tupu ịgha mkpụrụ, a na-etinye mkpụrụ n'ime ihe ngwọta nke potassium permanganate (1: 6000), nke nwere disinfecting Njirimara.
Na-akụ na ala oghe: ịhọrọ akwa ndị dị mma, na-echebara iwu nke ihe ọkụkụ ọkụkụ, nke dị anya site na mkpụrụ osisi cruciferous.
Na-akụ na griin haus: Na akwa akwa ọ bụla nke a ga-etinwu ọtụtụ ụbọchị ma ọ bụ nwere oriọna fluorescent. Tụlee osisi ndị agbata obi.
Atụmatụ ọdịda na-atụ aro:
Na-akụ na griin haus - oghere ndị a kwadebere nke ọma, tinye ya na ihe nlele. Ke kiet ke otu itia ẹsuande 1 mfri.
N'elu akwa nke obosara nke 0.8-1.0 m. mee 4 ahịrị dị anya nke 20-25 cm na etinyerịrị ruo 1.5-2 cm miri. A na-akụ mkpụrụ n'otu n'otu. Ebe dị anya n'etiti etinyerịrị dịkarịa 15 cm maka oge dị iche iche, ọ dịkarịa ala 8 cm maka mmalite. A na-atụ aro usoro a maka ịgha mkpụrụ n'ala.
Nest ọdịda - 3-5 mkpụrụ kwa nke ọma. N'ebe dị n'agbata oghere ruo 15 cm A na-atụ aro usoro a maka oghe ala.
n'osisi a na-agbapubeghị, nke a na-akwapu, a na-akụ mkpụrụ dịka atụmatụ ndị ahụ dị n'elu, ebe ọ na-eme ka mmiri dị ala n'oge gara aga;
a na-efesa mkpụrụ na ụwa;
ejighị ya kpọrọ ihe;
mgbe agha, fesaa akwa na osisi uyi.
A na-apụta na otu izu.
Ịgbara. A na-eme nsị n'ụtụtụ ma ọ bụ mgbede dị ka elu n'elu ala. Mgbe seedlings na-apụta, a na-eme ka akwa ahụ kwa ụbọchị. Mgbe osisi ahụ ruru elu karịa 10 cm, ha na-agba mmiri ndị dị na ya: ụdị mmiri dị iche iche na-eme ka mmiri dị ọkụ ugboro asatọ n'izu, ọ na-ewe ihe dị ka okpukpu 1-2 ugboro n'ọnwa.
A gaghị ekwe ka mmiri ghara ikpochasị ya, ma ọ bụghị mkpụrụ osisi ahụ ga-adị ilu ma sie ike. Atọ ọnụego: 10 lita mmiri kwa 1 square mita. A na-ekwe ka ịgba ogbugba mmiri.
Ala na-atọghe. A na-eme ya iji zere ọdịdị nke crusts n'elu ihe ndina mgbe ọ bụla ịgbara. Nke a ga-egbochi ihe omume nke ata ah u.
Fatịlaịza. Uwe elu dị elu na-abanye ruo ugboro atọ maka oge uto. Mgbe mkpụrụ ahụ pụta, nri mbụ ya na ụlọ nwere nitrogen nwere ike ịme ka o too. A na-edozi fatịlaịza n'otu izu. Nke atọ mgbakwasa na-rụrụ n'ime otu ọnwa na potassium, phosphate nri (superphosphate, urea).
Otu ọnwa tupu owuwe ihe ubi a chọrọ, a kwụsịrị nri. A na-ahọrọ nri ndị na-edozi ahụ compost, humus, extracts, ash ash.
Na-agbanye ma na-atụgharị ugwu. A na-eji mulik nke akwa akwa ma ọ bụ na-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ Ome, nke ga-echebe microclimate nke ihe ndina, mmiri na ihe ndị dị na ala. A na-eme hilling ugboro abụọ mgbe ọ gbasịrị.
Thinning. Mgbe Ome apụta, wepụ Ome nke kacha ike. Nke abụọ thinning na-rụrụ mgbe seedlings ga-3-4 ezi epupụta. Mkpa na akwa dị anya nke 5 cm n'etiti Ome. A na-emegharị nke atọ n'ime otu ọnwa, na-ahapụ ihe dị ka 15 cm n'etiti ihe ọkụkụ.
Black radish nwere pests ndị na-esonụ:
ihe na-esi ísì;
akwukwo akwukwo akwukwo;
onye na-eri nri mkpụrụ osisi;
Ọgwụgwọ mkpụrụ osisi:
infusion nke celandine;
osisi ash ngwọta;
a na-adịghị ike ngwọta nke mmanya;
ọgwụ "Intravir", "Fitoverm", "Lipocid".
Akuku akuku osisi.
N'otu oge, mkpụrụ germination na-budata belata. Ihe ndozi: nkwado ala na ala mmiri, ihe ndina na ihe nchekwa.
Osisi a Na-aghaghị Mkpụrụ - na-eduga ná ọrịa nke seedlings site pests.
Mgbe ihe ịrịba ama mbụ nke ọrịa ahụ gosipụtara, a na-emeso osisi ndị ahụ na ngwọta 1% nke mmiri boric acid, mmiri mmiri bordeaux, ọla sulphate.
Ịgha mkpụrụ nke ihe ubi na-achọ ntakịrị mkpụmkpụ nke mgbọrọgwụ, nke na-enyere aka igbochi mmepe nke mpụta nke mgbọrọgwụ, na-eme ka mkpụrụ osisi ahụ na-eto ma buru ibu.
Ọ na-adị mfe ịmalite ịkụzi akụ na-enweghị nlekọta, isi ihe kpatara ya bụ oyi. Iji zere nke a, ọ dị mkpa iji nọgide na-enwe ala na ala mmiri, na-ekpuchi ihe ndina ahụ na fim, iji gbochie ndigide nke akwa (na-emegharị oge).
Ngwunye mgbọrọgwụ kụrụ.
Na - eme ihe na - emebi ọgbụgba mmiri, mgbe ala na - anọgide na - akọrọ ruo ogologo oge. Iji zere ịwụ ala ala na-edebe ya mgbe niile na ọnọdụ ogwu.
Oge ntoju oge.
Mbelata nke na-ezighi ezi na-atụnye aka na mmepe ya, mgbe ahụ akụkụ ala nke osisi ahụ malitere ịba ụba. Mgbochi - nhazi nke mmemme nke mepụtara.
Black radish bụ osisi na-eguzogide ọgwụ na mgbọrọgwụ siri ike, nke a na-etolite n'ala na-emeghe nakwa na griin haus na ọnọdụ nlekọta obere. Nlekọta nke osisi ahụ na-enye gị ohere ịnweta nnukwu ihe ọkụkụ iji chekwaa ma jiri ya mee ihe, nri anụ na ọgwụ maka otu afọ zuru ezu.
Mgbu nke emerald na nchịkọta nke ụlọ gị ime ụlọ - alaeze ukwu begonia
Poplar rowing: nkọwa na ntụziaka
Althaea: ọgwụ ọgwụ na contraindications
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Atụmatụ nke kụrụ nwa radish n'ọhịa na griin haus